Sawir-gacmeedka Isboortiga ee Tokyo 1964 ilaa Rio 2016 | Abuurista khadka tooska ah
Sawir gacmeedka Isboortiga ee Ciyaaraha Olimbikada laga bilaabo Tokyo 1964 ilaa Rio 2016
Ciyaaraha Olombikada ee Rio waxay sii wadaan inay dhacaan dhamaan dhacdooyinka isboorti ee maalmahan waxay nagu hogaaminayaan inaan horjoogno telefishanka arag ciyaartoydeena u tartam miiska biladaha. Dhacdo aan la aqbali karin oo loogu talagalay malaayiin dad ah oo yeelan doona dhammaan noocyada dhacdooyinka isboorti ee dhammaan qeybaha kala duwan maalmahaan.
Laga soo bilaabo halkan at Creativos Online waxaan la wadaagnaa maanta sawirro sawirro dhammaan xirfadahaas oo ka soo gudbay Tokyo 1964 illaa Rio 2016 oo ay ka soo shaqeeyeen sawir-qaadayaal iyo hal-abuurro kala duwan kuwaas oo xirfadahooda u dhigay adeegga isboortiga. Aan baranno iyaga.
2 Mexico 1968
5 Moosko 1980
8 Barcelona 1992
9 Atlanta 1996kii
11 Athens 2004
14 Webiga 2016
Naqshadayaashu waa Yoshiro Yamashita iyo Masaru Katzumie. Ujeeddadu waxay ahayd in la horumariyo isgaarsiinta muuqaalka ee awooda wax ku ool ah in la ogeysiiyo kaqeybgalayaashii iyo daawadayaashiiba iyadoo tirada dhalashooyinka ciyaaruhu sii kordhayaan. Tani waa sababta ay qaababku u yihiin kuwo fudud oo toosan.
Koox hal abuur leh oo ka socota Waaxda Naqshadeynta Magaalada ee abaabulka Ciyaaraha Olombikada, oo ay ku jiraan Lance Wyman. Mid ka mid ah waxyaabaha lagu garto sawir-gacmeedka isboortiga ayaa ah kan keliya qayb jirka ka mid ah ayaa la baraa cayaaraha ama qalabka loo baahan yahay. Waxay tixraacaan dhaqanka Mexico iyo taariikhdiisa.
Waxay la socotaa macnaha guud ee Tokyo 1964 si loogu metelo silhouettes qaababka caadiga ah ee dhammaan qeybaha isboortiga. Culayska la saaray ayaa ah xeerarka joomatari iyo garaafka si heer looga dhigo. Tani waa taas xaglaha waa 45 ama 90 digrii iyo silhouettes-ka waxaa lagu soo saaraa tiro kooban oo ah qaybaha jirka.
Naqshadeeyaha waa Otl Aicher, waxaana la jaanqaaday Georges Huel iyo Pierre-Yves Pelletier. Halkan waxaa ah sii wadida astaamaha sawirada kuwii ka horeeyey. Wax ka beddelka waxaa loo sameeyay sawirrada qaar, gaar ahaan adeegyada, in kastoo kuwani aysan ka muuqan sawirka la wadaago.
Naqshadeeyaha waa Nikolai Belkov khadadka la adeegsadayna waa xaglaha 30 iyo 60 si loo siiyo aragtida dabacsanaanta sawirka. Xaglaha silhouettes way iswareegsan yihiin jidhkuna wuxuu ku jiraa hal xabbo, madaxa mooyee.
Naqshadayaashu waxay ahaayeen Keith Bright iyo Associates. Isku day ayaa la sameeyay si loo helo xuquuqda astaamaha ciyaaraha Munich, laakiin ka jaban abuurista kuwo cusub, go'aankan kama dambaysta ah ayaa la qaatay. Mabaadi'da naqshadayntu waxay ahaayeen: caddayn, isgaarsiin, joogteyn, akhrin iyo wax ku oolnimo.
Waxay ahayd hay'adda mas'uulka ka ahayd ciyaaraha lafteeda oo u xilsaartay naqshadeeyayaasha. Waxay u sameysay sawirro cusub oo sawiro ah cayaaraha Aasiya. Heshiisyada oo afar qaybood ah: madaxa, jirridda, gacmaha iyo lugaha; fiiro gaar ah ayaa la siiyay xiriirka ka dhexeeya qaybaha kala duwan ee jirka.
Josep María Trias ayaa mas'uulka ka ahaa qaabeynta. Gasho lahjadda dhinaca farshaxanka isla mar ahaantaana la mid ahaanta astaanta ciyaaraha Olambikada, oo sidoo kale uu naqshadeeyay isla naqshadeeyaha. Sida shakhsiyadda astaanta Olambikada lafteeda, saddex qaybood ayaa loo adeegsaday sameynta sawirrada: madaxa, gacmaha iyo lugaha. Jirridda waligeed lama sawirin, laakiin waxaa soo jeediyay xubno kale.
Naqshadeeyaha waa Malcom Grear isagana waxaa dhiirrigeliyay tirooyinka Giriiggii Hore. Naqshadeynta caadiga ah ee xiriir la leh asalka qadiimiga ah ee Ciyaaraha Olombikada. Habka silhouettes wuxuu isku dayayaa inuu noqdo mid macquul ah wuxuuna ku dhow yahay qaababka aadanaha.
Shaashaddaha sawir-gacmeedka ayaa la sameeyay sida haddii ay ahaayeen boomerangs, mid ka mid ah lugaha iyo laba ka yar oo gacmaha ah. Diirad gaar ah ayaa la siiyaa dhaqanka Aborijiniska Australiyaanka ah. Ujeeddadu waa inay ahaato mid firfircoon si loo helo astaamaha u deg-degga iyo xawaaraha orodada.
Naqshadeeyaha wuxuu ahaa ATHOC 2004. Dhiirrigeliyay dhaqanka Giriiggii hore, Shaashadda cayaaraha iyo tilmaamaha oo faahfaahsan waxay isku dayaan inay xusuusiyaan maraakiibta Giriiggii Hore. Jajabka maraakiibtan qadiimiga ah waxay u adeegeen sidii waxyoonay qaabka qaabdaran ee mid kasta oo ka mid ah sawirada.
Naqshadeynta waxaa loo xilsaaray Jaamacadda Tsinghua. Sawir-gacmeedka waxaa lagu dhiirrigeliyay qoraalada lafaha iyo naxaasta ee Shiinaha Qadiimiga ah oo loo qaabeeyey qaab casri ah oo fudud.
SomeOne Design Agency ayaa mas'uulka ka ahayd nashqadeynta. Lagu abuuray laba qaab oo kala duwan: nooc silhouette ah oo loogu talagalay isticmaalka caadiga ah iyo nooc firfircoon oo ahaa waxaa dhiirigaliyay khariidada dhulka hoostiisa mara ee London iyo khadadka isku dhafan ee ka baxsan tirada.
Isla xubnihii ururku u xilsaaray naqshadeynta. Shaashadaha ciyaartooyda waxaa lagu sameeyay iyadoo lagu saleynayo farta rasmiga ah ee Rio 2016. Font waxaa lagu dhiirrigeliyay astaanta Ciyaaraha Olombikada iyo gooladaha muuqaalka Rio XNUMX. The dheecaanka khadadka wuxuu diiradda saarayaa jilitaanka dhaqdhaqaaqa cayaaraha ficil ahaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » Sawir gacmeedka Isboortiga ee Ciyaaraha Olimbikada laga bilaabo Tokyo 1964 ilaa Rio 2016
Kuwa ugu dambeeya ee noqda astaanta cusub ee Mozilla
Sawir sawiro si aad ugu raadiso sawirrada 500px Splash